China Toyota Crown Ukukhiqiza neFektri | HankouBei
ICrown Athlete iyimoto ekahle ukushayela - isiteringi sinesisindo esihle, futhi sikuvumela uzwe umgwaqo nokuthi imoto yenzani. Ukugibela kuqinile, kepha hhayi kangangoba akunakuphatheka kahle emigwaqeni enamagqubu. Okuhlaba umxhwele kakhulu indlela ethule ngayo imoto nenjini engu-2.5 litre injini eyisilinda eyisithupha. Ngokungenzi lutho, umqhele ucishe uthule - uzozwa kuphela injini ngaphansi kwejubane elikhulu. Injini engu-2.5 litre ikhiqiza i-torque engu-149kW ne-243Nm, engaphezu kokwanele ukushayela usuku nosuku. Kukhona izinjini ezinkulu ezinamalitha ama-3 no-3.5-litre ezitholakalayo, okuzoba kuhle ukuba nazo, kodwa kungadingeki. ukuhamba ngamagiya amahlanu okuzenzakalelayo kuhle kakhulu, futhi kunezindlela zamandla neqhwa. Imodi yamandla ibangela ukuthi injini ivuselele phezulu ngaphambi kokushintshela ekusebenzeni okungcono, lapho imodi yeqhwa izosheshe isheshe ibambe kangcono ezimweni ezishelelayo. Kukhona neswishi engalungisa ukumiswa kube okuqinile ekusingatheni i-sportier.
IToyota Umqhele ISedan SUV LTVBG864760061383 2006/4/1 180000 3.0L AMT
Uphethiloli Mnyama I-China IV 4855/1780/1480 3GR-FE 4 5 I-LHD Ukuphefumula Kwemvelo phambi injini drive ezingemuva
IToyota Crown kuthiwa ithembeke ngokwedlulele - kuyaziwa kwezentengiselwano njenge- 'over-engineered', noma yakhelwe ezingeni eliphakeme kunaleli elidingekayo. Ucwaningo lwethu alutholanga zinkinga ezithile okufanele luzinakekele, kodwa njengenjwayelo, qinisekisa ukuthi imoto ihlinzekwa njalo.
Injini engu-2.5 litre V6 isebenzisa uchungechunge lwesikhathi kunekambelt. Lokhu kusho ukuthi mancane amathuba okuthi ingadinga ukufakwa esikhundleni sayo, kepha abavikisi bayo kanye nepompo lamanzi kufanele babe yingxenye yomsebenzi omkhulu njalo ku-90,000km.
IToyota Crown iyimodeli eyi-niche, edayiswa entsha ikakhulukazi eJapan. Asikwazanga ukuthola ulwazi olusebenzayo lokuhlolwa kokuphahlazeka.
Imoto yethu yokubukeza inezinga elifanele lezinsiza zokuphepha, ezinama-airbags abashayeli nabagibeli, ama-anti-lock braking, i-electronic stability control kanye ne-electronic brake-force distribution. Ikhamera ehlehlisayo ijwayelekile kuningi lalezi zimoto.
Inani elincane lamaCrown elenziwe kusuka ngo-2006 linama-adaptive cruise control kanye ne-radar-based based collision system, ezokhala i-alamu uma usengozini yokungena emotweni ephambi kwakho.
Isihlalo esingemuva sinamabhande ezihlalo amaphoyinti amathathu agcwele kuzona zontathu izikhundla, nama-ISOFIX akhweza izihlalo zezingane kanye nama-tether ezikhundleni zezihlalo zewindi.
Langaphambilini IToyota Highlander
Olandelayo: IToyota Crown
amabhubesi oLwandle i-jinbei
I-Fukuda BJ4253SMFKB - S2
Isivubukuli seVolvo ec55d
UDongfeng Nissan - Qichen t60ev